देशभरका एक हजार युवाहरुको जमघट बागलुङमा : फेरी आउने अवसरको प्रतिक्षामा सहभागी ! – ebaglung.com
देशभरका एक हजार युवाहरुको जमघट बागलुङमा : फेरी आउने अवसरको प्रतिक्षामा सहभागी !
२०७४ आश्विन ४, बुधबार १५:०५	Footer Slider, Top News, अन्य समाचार, विविध
बागलुङ २०७४ असोज ४ । लियो जिल्ला परिषद ३२५ बी१ को पहिलो काउन्सिल मिटिङ गत शनिवार र आइतबार बागलुङमा सम्पन्न भएको छ । लियो क्लव अफ बागलुङ कालिकाको आतिथ्यातामा देशभरका ६२ लियो क्लबहरुमा आबद्ध १ हजार लियो युवाहरुको समुपस्थितिमा कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको हो ।
स्थानीय सरकारी एवं सामाजिक सघं संस्थाहरुको सहयोगमा कार्यक्रम सफल पारिएको उक्त कार्यक्रमका संयोजक भुवन कँडेलले इृबागलुङ लाई बताए।
दुइदिन सम्म चलेको कार्यक्रममा उपस्थित सबै युवाहरुलाइ आयोजकका तर्फबाट खाना एवं बसाइको ब्यवस्था बागलुङ बजारकै स्थानिय होटलहरुमा गरिएको थियो ।
‘हामी निकै आभारी छौ, सबै सहयोगी सघं सस्थां एवं महानुभाबहरु प्रति जसले यो कार्यक्रम सफल पार्न प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रुपमा सहयोग गर्नुभयो, आयोजक लियो क्लब अफ बागलुङ कालिकाका अध्यक्ष्य सन्दिप कार्कीले ईबागलुङसंग भने, ‘यो कार्यक्रमले बागलुङको पहिचानलाई व्यापक बनाएको छ, हामीले पाहुनालाइ कालिका मन्दिर , पञ्चकोट, बागलुङ बजारको मुखमा रहेको लामोपुल लगायत पर्यटकीय स्थलको अबलोकन गराएका छौं ।’
‘यस कार्यक्रमले बागलुङ पर्यटन प्रबर्द्धनमा निकै फइदा पुगेको छ, ४८ जना पाहुनाहरु त मेरै होटलमा बस्नु भयो, बागलुङका सम्वन्धमा कम जाने बुझेका युवाहरु बागलुङमा आउनपाउँदा निकै हर्षित देखिन्थे, होटल पिस प्यालेसका सञ्चालक एवं पर्यटन ब्याबसायी निलेश राजभण्डारीले भने ।
कार्यक्रममा सहभगी लियो क्लब अफ पिस थाहा, मकवानपुरका अध्यक्ष अनित बिष्ट भन्छन, ‘आजसम्म बागलुङ नक्सामा मात्र देखेको थिएँ, कार्यक्रमको निमन्त्रणा पाइसकेपछि कस्तो होला बागलुङ भन्ने कौतुहलता थियो, हामी २ दिनको यात्रा पछि बागलुङ आइपुग्यौ, साँचिकै यहाँका आयोजक क्लबहरुका साथीहरुको सत्कार र यहाँको रमणीय ठाँउहरु देख्दा आफुलाइ निकै भाग्यमानी ठानेको छु, बिदा भएर जाने बेलामा फेरि कहिले आउने मौका मिल्ला भन्ने प्रतिक्षामा रहेको बताउदै उनले भने, ‘विभिन्न मनमोहक पर्यटकीय ठाँउ पञ्चकोट , कालिका मन्दिर घुम्ने अवसर मिल्यो जसकोलागि आयोजक क्लवलाइ धेरै धेरै धन्यबाद ।’
बागलुङमा कृयाशील तिनवटा क्लब (लियो क्लव अफ बागलुङ कालिका, लियो क्लब अफ धौलागिरि, बागलुङ र लियो क्लब अफ बागलुङ) को सयुंक्त आयोजनामा ब्राउन आइज रेस्टोमा सम्पन्न कार्यक्रमको उद्घाटन बागलुङ नगरपालिकाका प्रमुख जनकराज पौडेलले गरेका थिए । यस्ता कार्यक्रमले नगर लगायत सबै क्षेत्रको प्रबर्द्धनमा महत्त्वपूर्ण सहयोग गरेको उनको भनाई थियो ।
उत्तरगगां माध्यमिक विद्यालयमा विजया दशमी तथा दिपावलीको शुभकामना कार्यक्रम